Iingcebiso zokufakwa kweVsimle Milling Bur-iindaba-VSmile Co., ltd
Iingcebiso zokuFakelwa kweVsimle Bur
Ixesha: 2020-12-30 I ngxelo:93
Injongo: Thintela umonakalo kwindawo yokugaya ngexesha lofakelo
Ukufaka iiburs kumatshini wakho kuxa kunokwenzeka ukuba ubonakalise. Kule posi, siza kujonga izinto ezimbalwa onokuzenza ukuthintela umonakalo ngengozi kwibhasari yakho yokugaya.
Uninzi lweetekhnoloji zebhabhu azazi ukuba incam yebhasi intekenteke,I-carbide ye-tungsten eyenziwa yi-burs yinto enzima kakhulu. Nangona kunjalo, ukumila kwemathiriyeli emaphethelweni kuyenza ukuba ibe semngciphekweni wokonakaliswa. Impembelelo efanelekileyo inokubangela iziphene ezincinci kumda wokugaya we-bur. Ezi ziphene ziya kubufutshane kakhulu ubomi be-bur yakho.
Miingcebiso zokufaka i-illing bur:
Ezi ngcebiso zisebenza kwiRoland, VHF, Imes-icore, ZirkonZahn, Dentium, Arum, Sirona, Aamnn Girrllbach Milling Machine.
1. Soloko ulumkele incam ye-bur
Kulungile ukuba uqaphele ngokubanzi ukuba incam ye-bur ikuphi na ngalo lonke ixesha. Kulula ukuyibetha kwiindawo ezahlukeneyo ukuba awuyazi. Konke okudingayo kukubetha kanye kwi-engile elungileyo ukuze ubambe i-bur yakho.
2. Layisha ikhola shank kuqala
Xa unamathisela ikhola yentsimbi kwi-bur, soloko uqinisekisa ukuba ufaka i-bur shank (icala lomatshini) kuqala. Ngale ndlela uyakuphepha ukurhuqa umda wokusika we-bur ngaphaya kwekhola yentsimbi.
3. Yithobe ngobunono ibhegi kwisibambiso
Nje ukuba i-bur ikulungele ukufaka isiphathi somatshini, qiniseka ukuba uyibeka kumbambi ngaphambi kokutyhala. Ukuba iphumile embindini, inokubetha ecaleni okanye kumgangatho womnini kwaye yonakalise incam. Nje ukuba ifakwe, jonga kabini ukuba uhleli nkqo.
Ukuba ulandela ezi ngcebiso zilula xa ulayisha iibhasari ezintsha zokugaya, ungawanciphisa amathuba awo nawuphi na umonakalo owenzekileyo kwi-bur. le yongezwa i-inshurensi ngokuchasene nokunxiba kwangoko.
Ndinqwenela ukuba ufumane amava amnandi kakhulu nge-Vsmile milling burs zethu.
I-PREV: I-PFM VS Zirconia: Yeyiphi eyona nto ilunge ngakumbi?
OKULANDELAYO : Merry Chrimas & Happy New Year
I-Vsmile Cacisa i-PMMA yokuLuma okuLumkileyo
Vsmile HappyZir UT Multilayer Zirconia Block Iyahambelana neAmann Girrbach System
I-Vsmile 3D iMultilayer yeZirconia yeBhloko yeBhloko ye-A1